Saddexdan sheeko iyo xalka siyaasadeed ee maanta sidee isu qabtaan? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Saddexdan sheeko iyo xalka siyaasadeed ee maanta sidee isu qabtaan?
Markii 17 geela 2 meelood loo qaybiyey waxay wiilka weyn qaybtiisii noqotay 8.5.
• Markii 17 geela 3 meelood loo qaybiyey waxay wiilkii labaad qaybtiisii noqotay 5.66.
• 17kii geela ahaa waxa uu kusoo daray neef geela oo uu isagu leeyahay waxayna isku noqdeen 18 geela.
• Ka bacdi 18kii geela ahaa waxa uu u qabyiyey 2 qaybood oo middiiba noqotay 9. Markaasbuu wiilkii weynaa siiyey 9 neef oo geela.
• Haddana 18kii buu u qaybiyey saddex meelood meel oo noqotay 6. Markaasbuu wiilkii labaadna siiyey 6 neef oo geela.
• Haddana 18kii buu u qaybiyey sagaal-meelood oo meeshiiba noqotay 2. Markaasbuu wiilkii saddexaadna siiyey 2.
• Marka intaa laysu geeyo waxay noqdeen 17 geela (9+6+2).
1aad: In qaarkiin la muquuniyo, la cadaadiyo oo la jiidhsiiyo xal aanay iyaga iyo inta la jirtaa raalli ku ahayn.
2aad: In qaarkiin tanaasulaan oo gebi ahaanba ka laabtaan mawqifyadii ay ka taagnaayeen arrimaha idin horyaalla.
3aad: In aad wax xal ah isla gaari waydaan, xaqiiqda ka warwareegtaan oo indhaha ka qarsataan qodobada masiiriga ah oo aad wax qabyo ah iyo af-gobaadsi ku kala tagtaan.
4aad: In aad isu-tanaasul samaysaan, meel dhexe isugu timaadaan oo mid kastaa kasoo kaco halkii uu taagnaa.
5aad: Iyo in aad gaartaan xal isla-ogol ah, danihii aad matalayseen ka wada muuqdaan, wada guulaysataan isla markaana raalli ku wada tihiin idinka iyo inta idin kala taageersaniba.
Iyadoo isku-dhac weyn laga baqayo baa waxaa kusoo baxay Nabi Maxamed (scw) oo markaa ahaa nin dhalinyaro ah laakiin run-sheegnimo iyo amaano lagu yaqaanay. Ka bacdi waxa ay u sheegeen khilaafkii jiray iyaga oo ka codsaday in uu dhexdhexaadiyo. Xabiibku (scw) taariikhdooda muu ku mashquulay, yaa laandheere ah, yaa dhigi jiray hadda kahor, yaan hore u dhigin oo markan xaq u leh, yaa xoog badan iwm. waxaas kuma mashquulin waqtiga ma iska gelinin. Waxa uu toos u abbaaray sidii uu danahooda isu waafajin lahaa.
Waxa uu falanqeeyey isku dayey inuu fahmo waxa la isku hayey waxay yihiin.
Mawqifyadooda muu eegine danahooda buu fiiriyey. Wuxuu ogaaday inay dhammaantood raadinayaan SHARAF, MAAMUUS, BARAKO iyo MAGAC u gala taariikhda. Ka bacdina waxa uu keenay xal ay dhammaantood sharafta, maamuuska, barakada iyo magaca ku wada helaan. Waxa uu usoo jeediyey inay go’ ku dhex ridaan dhagaxa iyagoo dhammaantood hareeraha isla qabanaya sidaana iyaga oo isu dhan xajar-aswadka meesha loogu talogalay u wada saaraan. Waxa uu Udgoonuhu (scw) keenay xal isla-ogol ah oo danahooda is waafajiyey sida maxsuulka 5aad dhigayo. Xikmadda sheekada iyo sida ay ula xiriirto xalka madaxda looga fadhiyo idinka ayaan idiin dhaafayaa.
In waqti la galiyo in la fahmo danaha hoose (ma aha mawqifyada afka laga sheego) ee dadka wax idinka dhexeeyaa ka leeyihiin arrimaha laga wadahadlayo
Previous articleXildhibaano badan oo saf ugu jira la kulanka Ra’isul Wasaaraha cusub iyo ujeedka keenay
Next articleFadeexad aad u weyn oo la soo deristay Hay’adda Adeegga Caafimaadka ee dalka Kenya
KASHIFAAD: Mareykanka Oo Labo Far Hordhigay Deni & Madoobe
Maxkamadda ICJ oo War cusub ka soo saartay dacwada badda ee Somalia & Kenya
Weriye caan ah oo lagu dilay Gaalkacyo iyo faahfaahino ka soo baxaya
Axmed Madoobe oo Wajahaya loolankii Abid Ugu Culusaa oo Kaga Imaada DFS Iyo Dagaal Laga Cabsi Qabo
Muqdisho oo marti gelineysa shir beeleedkii ugu weynaa
XOG:Madaxweyne Lafta gareen Oo Go’aankiisa Diiday Inuu Ka Laabto & Odayaal Careysan
Isu socodka gaadiidka Nairobi iyo Mandera oo dib loo furay & Alshabab oo laga cabsii qawo…….
RW Khayre oo ka qeyb galay Shirka tubta horumarinta arrimaha bulshada (Sawirro)
Nin arrin kale u tagay isbitaal oo gudniin lagu sameeyay “Dhacdo Layaab Leh”
“Beer-laxawsiga Kenya ee SOMALILAND waa suxul maroojin ku aadan Somalia”
Dowladda Soomaaliya oo loogu baaqay waxka qabashada Ayaxa & Halis badan oo ka jirta
DEG DEG:Qarax aad u xoogan oo xiligaan kadhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan…
Shirka Imaaraatka, Ethiopia iyo Eritrea ee Abu-Dhabi iyo Shirqoolka Soomaaliya